ညစ်ပတ်ပေရေနေသော ကွန်ပျူတာ — MYSTERY ZILLION
ဖုန်များ၊ ပင့်ကူအိမ်များနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်ပါတယ်... ဖုန်တွေ ၀င်နေတဲ့ CPU Fan၊ ဖုန်များ ကပ်နေသော Motherboard၊ ရှှုပ်ထွေးနေသော Power cable & IDE cable များကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းလို့ ရနိုင်မလဲ............ ဖုန်တွေ ဆေးချင်ရင်ရော အရက်ပြန်နဲ့ စုတ်တံ နဲ့ ရှင်း ပစ်လို့ရနိုင်မလား.......... Casing ကိုဖွင့်လိုက်ရင် အူယားလွန်းလို့ပါ.... ကူညီပေးပါနော်............ နော်တစ်ခုက DVD/CD Drive ခဏခဏ ပျောက်ပျောက်သွားတယ်....... IDE ကို ဇောက်တိ ဇောက်ထိုး ခဏခဏ ပြန်ပြန်တပ်ပေးနေရတယ်...(ကားလိုပြောရင် ပလပ်ပြောင်းရိုက်ပေးရတာပေါ့).. ကူညီကြဦးနော်....
(မှတ်ချက်။ ။ စက်အတွင်းပိုင်းကို လေမှုတ်စက်နဲ့ လုံး၀ မနိုင်ဘူး၊ ဖုန်တွေ ကြေးတွေ အရမး် ထူနေလို့...........:D)
အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီဖြုတ်ပြီး ... စုတ်တံနဲ့အရက်ပျံနဲ့ ဆေးလို့ရပါတယ် Bro ...
အဲဒါက အရှင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ .....
CD Drive ခဏခဏပြုတ်တာက ..... IDE ကြိုးလဲတတ်ကြည့်ပါဦး ... ပြီးတော့ IDE Slot လဲပြောင်းစိုက်ကြည့်ပေါ့ ။
ကိုအလက်ဇန်းဒါးက အရောက်ပို့ပြီ။ အရက်ပျံသုံးရင် အထဲက circuit တွေ ဘဝပြောင်းသွားအုံးမယ်။ circuit တွေအကြောက်ဆုံးက ရေနဲ့ အပူပဲ။ စုတ်တံသုံးမယ်ဆိုရင်တောင် static charge တွေ ရဲ့ အနှောက်အရှက်က ကင်းအောင် စုတ်တံကို ဝါယာကြိုးနဲ့ earth ချပြီးမှ ဖုန်သုတ်ရမှာ ဟုတ်ဘူးလား။ A+ စာအုပ်မှာဖတ်ရတာကိုပြောတာ။ (ကိုအလက်ဇန်းဒါးကို ပို့လိုက်ပြီ ပျော်လိုက်တာတော့):D
အရက်ပျံနဲ့ဆိုရင်တော့ရပါတယ် ကိုအိုင်းရဲ. ....
ကျနော် Winner Computer မှာ လုပ်တုန်းက .... တစ်ချို. Mother Board တွေဂျီးတွေများပြီး မတက်လာတော့ရင် ... စုတ်တံနဲ့ အရက်ပျံနဲ့ သုတ်ပြီး နဲဲနဲအပူပေးပြီး ငွေ့ပျံအောင်ထားလိုက်တယ် ... အများအားဖြင့်ပြန်ကောင်းသွားတတ်တယ် ....
Graphics Card တွေဆိုလဲဒီလိုပဲ ... အရက်ပျံနဲ့ဆေးပြီး ဂျီးချွတ်ပေးတာ ... တစ်ချို.ပြန်အလုပ်လုပ်သွားတာပဲ ....
Alexander က Office မှာဆို အလုပ်နှစ်မျိုးလုပ်တယ်။
ရတယ်ဆို sorry နော် တို့အကိုကြီးက ချောလဲချောတယ် သဘောလဲကောင်းတယ် စိတ်မဆိုးဘူးမဟုတ်လား။ စိတ်ဆိုးရင် လမင်းနဲ့ လင်ငယ် အဲလေ ပင်လယ်သီချင်းဆိုပြလိုက်မယ်:D မသိပါဘူး အနော်က ရေနဲ့ အရက်ပျံ အတူတူလားလို့။ sorry sorry
ဟာ။ မှားတာပေါ့။ ဖုန်စုတ်စက်နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ပြီးပြီ။ ဟုတ်ဘူးလား။ ဖုန်တွေအကုန်လုံး ဖြုတ်ကနဲပါသွားမှယ။ :67:
zmtfatzombie wrote: »
ဖုန်တွေက အစိုပြန်ပြီး ကပ်နေရင် ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ မှုတ်လဲမရတော့ဘူး Bro.
အဲလိုမျိုးကျတော့ ဖုန်စုပ်စက်လဲမနိုင်တော့ဘူး။ ဖုန်မှုတ်စက်လဲမနိုင်တော့ဘူး ....
ဒုတိယ အားလုံးကိုဖြုတ် (harddisk,memory,cpu,ide,vga card)
ပြီးရင်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆီသုတ် အမေဘုတ်ကိုလည်း သုတ်
အော် သုတ်တာက ဘရပ် နဲ့ပါ ကြက်မွေးလည်းလိုတယ် အပေါ်တွေဘာတွေခါတာကတော့ ကြက်မွေးနဲ့ပါ
ဟဟ:D:D:D အဲဒီထက်ဆိုး တာတောင်ရှိသေး Motherboard, VGA,....မတတ်တော့ရင် အရင် ဂျီးချွတ် ပြီးရင် ရေထဲကို တညလောက်စိမ် ထားပီ အတေအချာ အခြောက်ခံ ပီပြန်သုံးတော့ကောင်းသွား တာတွေအများကြီ: ဗျ...:D:D:D စာအုပ်နဲ့လက်တွေ့မတူတာတွေအများကြီ: ပါ...:78::78::78:
ဟိုတုန်းက ကျနော့်ဦးကြီးလဲ အဲလိုလုပ်တာတွေ့ဖူးတယ်၊ သူက စာပုံနှိပ်တိုက်ထောင်ထားတာ ..
ဟိုတုန်းက စက်လှေကနေပါလာတဲ့ Printer တို့ copier တို့ပေါ့ .. စက်လှေကပါလာတာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆားချေးတွေတက်လို့ပေါ့ .. စက်တွေကလဲ အဟောင်းဆိုတော့ အလုပ်မလုပ်ဘူးလေ .. ဘယ်ရမလဲ ဦးကြီးက လာထားက ချေးချွတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး တစ်စစီဖြုတ်ထုတ်ပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ရေနဲ့အကျအနဆေးတာပေါ့ .. ပြီးတော့ နေပူလှန်းပြီး အခြောက်ခံတယ်၊ ပြီးတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာ ပြသာနာရှိနိုင်လဲ ရှာ .. ပြင်စရာရှိတာပြင်နဲ့ .. နောက်တော့ ပြန်တပ်ပြီးစမ်းတာ တချို့စက်တွေ အလုပ်ပြန်လုပ်တာဟ
ဟုတ်တယ်ဗျ။ နာဂစ်တုံးက ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းက စက်တွေလည်း ရေတွေကိုစိုနေတာ။ အခြောက်ခံပြီးသုံးတာရတာပဲဗျ။ ပြီးတော့ ဘယ်မှာလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး:O ဖတ်ဖူးတာ motherboard ကို ရေနဲ့ ဆေးလို့ ရတယ် ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် ရေဇလုံထဲ ထည့်ပြီးတော့ သေချာတိုက်ချွတ်ပြီး အခြောက်ခံ ပြန်တက်ပေါ့။ အဲ ပျက်သွားရင်တော့ သားသားအပြစ်ဟုတ်ဖူးနော်။ ဟို ဂျာနယ့် အပြစ်ပေါ့။:D
motherboard ကို ရေနဲ့ ဆေးလို့ ရတယ် ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် ရေဇလုံထဲ ထည့်ပြီးတော့ သေချာတိုက်ချွတ်ပြီး အခြောက်ခံ ပြန်တက်ပေါ့။ အဲ ပျက်သွားရင်တော့ သားသားအပြစ်ဟုတ်ဖူးနော်။ ဟို ဂျာနယ့် အပြစ်ပေါ့။:D
သွားမလုပ်ကြနဲ့ ဂျီးတော်တို့ရေ တော်ကြာ သူကြီးအမှုရွာပတ်နေအုံး :P
အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတဲ့ motherboard ကြီးကို ရေဇလုံထဲထည့်ပြီး pc performance ကောင်းအောင် သွားမဆေးကြပါနဲ့ဗျာ ..
တော်ကြား ကိုbox02 နဲ့ ကိုကိုကို၀င်းတို့ မြှောက်ပေးလို့ လုပ်တာ မီးမှာ ဒုက္ခရောက်နေပြီဖြစ်နေအုံးမယ်
ကျတော်တော့ Hard Disk ကို ရေဆေးပြီး နေလှန်းတဲ့သူ တွေ့ဖူးတယ် .. ကံကောင်းတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဖူးဗျာ .. အကောင်းအတိုင်းပဲ . အံ့ရော ... ):))
memory card တစ်ခုရယ်, Hard disk တစ်ခုရယ်ကို ရေထဲမှာ တစ်ညစိမ်ပြီး နောက်နေ့ နေပူပူမှ လှမ်းပြီး အခြောက်ခံလိုက်တာ.. ပြန်ကောင်းသွားတာပဲ:106:
အိမ်မှာပျက်နေတဲ့ hardisk တစ်လုံးရှိတယ်...
အားပေးတယ် လုလုရေ ....
ပျက်နေတယ်ဆိုမှတော့ စမ်းသာစမ်း .... သန်းခေါင်ထက်ညမနက်ပါဘူးနော့် .... :P
Good တယ်ထင်ရင် DO သာ DO